ကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေး - သင်ခန်းစာများ - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်порно
အိုကေ - ဒါကြောင့်နေ့ ၄၈ မှာပြန်ဖြစ်ပြီးနောက်ငါပြန်စတယ်။
ငါပြန်မသွားခင်ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်တုန်းကငါအရမ်းဘလော့ဂ်ကိုရပ်လိုက်တယ်။ နောက်တဖန်စစ်တိုက်ရာတွင်တစ် ဦး တည်းခံစားစတင်ခဲ့သည်။ ငါထင်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်တစ်ယောက်တည်းခံစားရပြီးအရှုံးပေးရန် ပို၍ လွယ်ကူအောင်အထီးကျန်သည်နှင့်အမျှထင်သည်။ ထူးဆန်းတဲ့နည်းနဲ့ဒီအသိုင်းအ ၀ ိုင်းထဲကိုဝင်ဆန့်နေခြင်းဟာရုန်းကန်နေရတဲ့တခြားသူတွေနဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာပုံဖော်စေသည်။ ထို့အပြင်အခြားပို့စ်များကိုဖတ်ခြင်းနှင့်ဘလော့ဂ်များပေါ်တွင်အပြုသဘောဆောင်သောမှတ်ချက်များကိုရရှိခြင်းသည်လူတစ် ဦး အားအာရုံစူးစိုက်မှုရှိစေရန်ကူညီပေးသည်။
2 ။ ပိုပြီးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကိုယူ
ငါပြောင်းလဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အကျင့်တစ်ခုကတော့ငါနဲ့ငါ့ ipad ကိုရေချိုးခန်းထဲမသွားတော့ဘူး။ ငါက ipad ကိုရေချိုးခန်းထဲယူပြီးပလ္လင်ပေါ်မှာရှိနေတုန်းမှာစာဖတ်တာအားလုံးကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ ငါသည်လည်းဤသည်အန္တရာယ်ရှိသောအလေ့အကျင့်သဘောပေါက်လာတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကသို့မဟုတ်ပြန်မပြန်မီ - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောသဘာဝပိုမိုသောအကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ် (ဘာကြောင့်မသိဘူး) စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဆောင်းပါးများကိုပိုမိုအာရုံစိုက်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းအမျိုးအစားဆိုဒ်များပေါ်တွင်သာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်“ သင်၏ဇနီးသို့မဟုတ်မိန်းကလေးအားပါးစပ်ဖြင့်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုခြင်း” ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။
ထိုအပတ်၌စာဖတ်ခြင်းပိုမိုဆိုးရွားလာပြီးဆောင်းပါးများကိုရှာဖွေနေစဉ်ကျွန်ုပ်သည်တခါတရံ ပို၍ မရိုးသားသောဆိုက်များကို“ မတော်တဆ” ထိ မိ၍ လဲမိတတ်သည်။ ကိုယ့်ချက်ချင်းပိတ်မယ်လို့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ကြွင်းသောအရာသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ သိပ်မကောင်းဘူး။ ဒီတော့ yeah … ..from ယခုအခြေခံအားဖြင့်ကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းတွင်ဖတ်ရှုခြင်းများရှိလိင်ဆိုင်ရာစွဲချက်တင်ထားသည့်အကြောင်းအရာများကိုဖြတ်တောက်သည်။
3 ။ လိင်ပြီးနောက် Chaser များအတွက် Watch
ငါပြန်လာတဲ့အခါငါ chaser စီးနေပြီဆိုတာတော်တော်လေးသေချာပါတယ်။ ငါ့ကိုအရမ်းဂရုမစိုက်ဘူး။ ပိုပြီးသတိထားရမယ်။
4. Refocus - တစ်ချိန်လုံး
ကျွန်ုပ်လုပ်ရသည့်အဓိကအကြောင်းရင်း - ကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးကို - ပြန်စဉ်းစားရန်လိုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပုံရိပ်ကြီးကိုသတိရနေရန်လိုသည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏မိသားစု၏ကောင်းကျိုးအတွက်ဖြစ်သည်။
အိုကေဒါဆိုဒါကငါလုပ်ချင်တဲ့နောက်ဆုံးအချက်ပဲ။ ပြန်မရခင်မှာငါအရမ်းယုံကြည်မှုစတင်လာတယ်။ ငါစွဲပြီးပြီပြီးပြီစဉ်းစား။ ငါမှားယွင်းနေတယ်၊ ​​ငါပြန်လည်ထူထောင်လာတယ်။ ငါဟာလိင်ဆိုင်ရာစွဲချက်တင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေတောင်မှစာဖတ်နိုင်ဖို့သေချာတယ်လို့ခံစားမိတယ်။ ငါရက်ပေါင်း ၅၀ အတွင်း ၁၅ နှစ်စွဲလမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်နိုင်မယ်လို့တွေးမိတာကမိုက်မဲခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ရှေ့တွင်ရှည်လျားသောတိုက်ပွဲတစ်ခုရှိသည်။ မဆိုထောက်ခံမှု (အမြဲကဲ့သို့) ကြိုဆိုလိမ့်မည် !! ကောင်းသောရန်ပွဲကိုတက်ကြွနေသောငါ့ညီအားလုံးအားကံကောင်းပါစေ။